Maxaad Ka Taqaana Ciyaaro Hiddoodka Soomaalida? | HAYAAN NEWS
Maxaad Ka Taqaana Ciyaaro Hiddoodka Soomaalida?
“Dhaawaca u gu weyn waxaa geystay magaaloobidda oo aan dhaqankii miyiga intiisii wanaagsanayd loo soo rarin”
Saylici, Ceerigaabo, Dhaanto, Jaandheer, Bullo, Batar, Hirowle, Bariyo, Walasaqo, Saar, Boorane, Mingis, Haan, Kabeebey, Shirib, Diisow, Balaqley, Niiko, Gaaley, Goobile, Xadro… Waa in ka mid ah ciyaaro hiddoodka Soomaaliyeed.
Umadda Soomaalidu wax ay ka mid tahay kuwa dadyowga dunida u gu fac weyn. Afkeeda, hiddaheeda, dhiiggeeda iyo dhulkeedaba arrintaa si cilmi ah iyo si caqli ahba waa ah u ga muuqataa. Haddaba ciyaar hiddeedyada ama ciyaar dhaqameedyadu waa raad aad u muuqda oo la ga arko facweynida iyo asal fogaanta soomaalida, iyo isla jeerkaa hodannimada hiddaheeda soojireenka ah ee kumannaanka sano isa soo biirsaday. Ma rumaysni dunida in ay jirto ummad isir qudha ah oo leh inta ciyaaro hiddood ee Soomaalidu lee dahay.
Ciyaaro hiddoodka waxaa la ga baran karaa hab-fikir iyo hab-dhaqan bulsheed iyo duni dhan oo tagtay ama gabowday oo ay Soomaalidu ku soo noolayd kumannaan sano. Mid waliba wax ay ina baraysaa culuun taariikheed, afeed iyo dhaqameed oo ay boqallaal buug ina bari lahaayeen. Sidaa darteed baadhisteeda iyo ilaalinteedu mar waa sii wadid dhaqan awowyo iyo ayeyooyin oo barwaaqo ahaa, kol kalena waa madxafyo iyo maktabado nool oo horteenna cammiran. Haddaba taasi waa waajib qoomiyadeed.
Maamulkii Kacaanku dhab ahaantii xil aan yarayn buu iska saaray hawshan, waxaana la qarameeyay kooxo iyo hooballo carbisan oo dalka iyo dunidaba si qurux badan u gu soo bandhiga ciyaaraha Soomaalida. Iidaha iyo maalmaha kale ee waaweyn oo dhan fagaarayaal bulsheed baa la gu dheeli jiray la guna daawan jiray ciyaarahan. Ha yeeshee sidii wax waliba u dumeen ayay taasi u duntay. Maanta waa dhif hoobal soomaaliyeed oo aqoon u leh ama dhallinyarada bari karaa. Mana jirto haba yaraatee cid u xilsaaran ama isu xilqaanta arrinta noolaynteeda iyo ilaalinteeda. Waxaa ka daran sida miyigii iyo degaannadii la ga ciyaari jiray dhaqanguur u gu dhacay ee ay u yar tahay beel barbaarteedu halkii ka waddo quruxdii ciyaar dhaqameedda. Dhaawaca u gu weyn waxaa geystay magaaloobidda oo aan dhaqankii miyiga intiisii wanaagsanayd loo soo rarin, iyo fikirka diineed ee cusub ee Sacuudiga innaga soo galay oo wax wal oo hiddaha la xidhiidha inoo foolxumeeyay si mid Carbeed meesha u buuxiyo. Run ahaantiina waa arrin aad iyo aad u xanuun badan in ay horteenna ku dhintaan oo ku dabargo’aan waxaas oo qurux iyo ilbaxnimo ummadeed ah oo aynnu boqollaal siyood wax u ga baran lahayn.
Wax aan ku talinayaa, sidii aan beri fog ku taliyay, qodobbadan:
Ciyaaro hiddoodka in la ga dhigo maaddo waxbarashada dugsiyada ka mid ah.
In la abuuro kooxo faneedyo heer qaran iyo heer gaar ahba leh oo u jabsan dhammaan ciyaarahaas, magaca iyo quruxda soomaalidana dunida tusa.
Cawaysyada la gu baashaalo ee muusigga reer Galbeed la gu qoobciyaaro in loo rogo ciyaar dhaqameedyada.
In la isbaro oo la isu sheego tani in aanay ahayn oo keliya ilaalin hidde qurxoon oo hodan ah, laakiin ay sidoo kale wax aad iyo aad u weyn u tarayso caafimaadka nafsiyadeed iyo jidheed ee bulahada, siiba barbaarta.